विदेशबाट फर्केर तरकारी र डेरी
थप समाचारबिहिबार, २० मंसिर , २०७५
दैलेखको गुराँस गाउँपालिका-५ गैरीगाउँका गणेश डाँगी (३८) पैसा कमाउने सपना देखेर दुबई हान्‍निए । ९ महीनासम्म दुबईको एक कम्पनीमा काम गरेर रु. १ लाख पनि घरमा पठाए । केही महीनापछि कम्पनी बन्द भयो, बाँकी रकम पाएनन् । खाली हात गाउँ फर्किए ।
त्यसपछि गाउँमै तरकारी खेती र डेरी सञ्‍चालन गर्न थाले । तरकारीबाट ५० हजार र डेरीबाट २० हजार गरी मासिक रु. ७० हजार कमाउने गरेका छन् । गाउँभरिका गाई-भैंसीको दूध उनको डेरीमा संकलन हुन्छ । डाँगीले तरकारी र दूध सुर्खेत र नेपालगञ्‍ज पठाउँछन् ।
१५ रोपनीमा तरकारी खेती गरेका छन् । गाउँको तरकारी पनि संकलन गरेर बजार पुर्‍याइदिन्छन् । उनी रित्तोहात गाउँ फर्किंदा धेरैलाई दुबई जाँदा लागेको ऋण कसरी तिर्लान् भन्‍ने लागेको थियो । तर, तरकारी र डेरीको आम्दानीबाट ४ महीनामै ऋण तिरे ।
अहिले उनी डाँगीगाउँकै अगुवा कृषक बनेको गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओली बताउँछन् । उनको डेरी सञ्‍चालनमा नआउँदासम्म गाउँको दूध, दही आ-आफ्ना परिवारमै सीमित थियो । अहिले धमाधम बजारमा पुगिरहेको छ । धरमपोखरामा दूध प्रतिलिटर रु. ४० सम्ममा बिक्री हन्छ ।